I-Bouanay Djakah iyimbiza yokuqhakaziza yamasiko ngokusebenzisa izindaba nezaga, ingcebo yamasiko eyenziwa ngabokhokho base-Afrika.
U-Arise Black man, njengeNgonyama yaseMandingo, uSautiiata Kéita: Umuntu Omnyama kufanele aqhamuke lapho abanye bemdumaza futhi bamphatha ngendlela engelutho… (VideO)
Kuthunyelwe ngu: Bouanay Djakahku: Julayi 7, 2018 04: 00 Awekho amazwana
Kufanele uzisize, njengoSautiiata Keita, ngesikhathi sakhe, ngemuva kokuhlazeka okukhulu okwenziwa ngunina. Ake siyeke ukuzishushisa sivuke!	Funda kabanzi
Ukukhululwa: "Ngithi, uBouanay uthi" Masiqaphele imbewu yokuhlukaniswa: abantu abaningi abangafundile emazweni ethu ase-Afrika bavumela ukuthi baphathwe yizombangazwe ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: Bouanay Djakahku: Julayi 6, 2018 02: 55 Awekho amazwana
Owake waba namandla akhumbuli abavoti bakhe ... Izombangazwe, inkolo, i-fibre yamazwe ngephutha ngesimo esibucayi sokuhlukaniswa.	Funda kabanzi
Ngiyabonga MAMA AFRIKA, noDavid Diop waseSenegal noPerre-Claver Akendengué waseGabon ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: Bouanay Djakahku: Julayi 5, 2018 15: 40 Awekho amazwana
I-Afrika yethu ifanelwe yimali yethu. Izingane zakhe ezinjengoPierre Akendengué noDavid Diop zamhlonipha kakhulu. Ngijoyina izwi lami kulabo balezi zingane ezinhle ukukhombisa uthando lwami ...	Funda kabanzi
Owesifazane wase-Afrika, ziqhayise: namuhla, abesifazane base-Afrika bandisa ubuciko obanele ukuze bazenze babahle:… (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: Bouanay Djakahku: Julayi 4, 2018 21: 40 Awekho amazwana
Izinwele zamanga, izipikili zamanga, izinkophe zamanga, amabhuzu amanga. Bazokuya kude kangakanani? Ingabe ziyasebenza futhi zenziwe ngokweqile futhi zisezingeni eliphezulu? UBouanay Djakah wayeyisimenywa esikhethekile se ...	Funda kabanzi
Indaba kuwe, Sithandwa sami sase-Ivory Coast: abantu emazweni amaningi ase-Afrika bayalwa, bahlukane, bahlukane kwezepolitiki ... (VideO)
Kuthunyelwe ngu: Bouanay Djakahku: Julayi 1, 2018 09: 21 Awekho amazwana
Sekuyisikhathi sokuthi abantu esikanye nabo baqonde ukuthi osopolitiki bayizitha hhayi izitha ezihlayo. Bazwisise ukuthi osopolitiki babusebenzisa njenge ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: Bouanay Djakahku: Juni 29, 2018 21: 27 1 Comment
Iqembu eliphikisayo emazweni ethu ase-Afrika lishiya ngaso sonke isikhathi isikhathi sokuhlakazeka, linciphiswa yizinkinga zabantu, libanga izimpi. Lesi simo simenza abe buthaka futhi abe sengozini ...	Funda kabanzi